Sale Staff Archives - Glory Assumption Space
1. Sales Staff – Female (10) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ။
1. Sales Staff – Female (10) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ။ • ဘွဲ့ရ သို့မဟုတ် ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းရမည်။ • အသက် (၃၀)နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်။ • English4skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။ • ပြည်ပခရီးစဉ်များ လိုအပ်ပါက သွားနိုင်ရမည်။ • Microsoft Word, Excel အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် (8:00 AM – 6:00 PM )၊ လိုအပ်ပါက OT ဆင်းနိုင်ရမည်။ • တစ်ပတ်တစ်ရက် နားခွင့်ရှိသည်။ • မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ အားကစားပစ္စည်း Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
၁) Sales Staff ( or ) Sales Man – Male - ( 10 ) Posts / လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ် / ​​ထောက်​ကြန်​.မြို.နယ်​။
Location in : ထောက်ကြန့်
၁) Sales Staff ( or ) Sales Man – Male - ( 10 ) Posts / လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ် / ​​ထောက်​ကြန်​.မြို.နယ်​။ • ၁၀ တန်း (သို့ ) ၁၀ တန်းအောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ • FMCG အရောင်းပိုင်းဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၁ ) နှစ်ရှိ ရမည်။ • လျှပ်စစ်စက်ဘီးဖြင့် အော်ဒါလိုက်ကောက်နိုင်ရမည်။ • လျှပ်စစ်စက်ဘီးစီးနိုင်ရမည်။ရန်ကုန်လမ်းကျွမ်းကျင်ရမည်။ • အပင်​ပန်းခံ နိုင်​သူဖြစ်​ရမည်​။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၈ နာရီခွဲမှ ညနေ ၄ နာရီခွဲအထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ • တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ​ထောက်​ကြန်​.မြို.နယ်​ FMCG ​Distribution Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Staff – Female – (5) Posts/လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်
Location in : Pabadan
###### URGENT REQUIREMENT ###### GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ရွှေဆိုင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ၁) Sales Staff – Female – (5) Posts/လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်/ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။ - ၁၀ တန်းအောင်ဖြစ်ရမည်။ - ရွှေ၊ပလက်တီနမ် များကိုရောင်းရမည်။ရွှေအရောင်းပိုင်းကို Training ပြန်ပေးမည်။ - အရောင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံ ( ၁ ) နှစ်ရှိရမည်။ - သွက်သွက်လက်လက်နှင့်စကားပြောဆိုနိုင်ရမည်။ - Computer အနည်းငယ်သုံးနိုင်ရမည်။ - အသက် ၂၇ နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် မနက် ၉ နာရီခွဲမှ ညနေ ၅ နာရီခွဲအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ - တနလာင်္နေ့နှင့် အခါကြီးရက်ကြီးများပိတ်သည်။ - ဗိုလ်ချုပ်ဈေးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Staff – Female (5) Posts / လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်/ အင်းစိန်မြို့ နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။ GAS Company နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။(တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်) 1.Sales Staff – Female (5) Posts / လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်/ အင်းစိန်မြို့ နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ ရရှိပြီးသူ (သို့မဟုတ်) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၇)နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - Sales Staff လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ် အထက်ရှိရမည်။ - အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - အလုပ်ချိန် (9:00 AM to 6:00 PM) - တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ - Uniform နှင့် Ferry ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784. Viber Phone Number –09262223784, 09 977397705, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။)
Sales Staff – Male /Female (5)Posts / လစာ-၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Interior Decoration Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ ၁) Sales Staff – Male /Female (5)Posts / လစာ-၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် /မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ - ၁၀ တန်းအောင်ဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - အသက် ၃၀ နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Poin နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Staff – Male /Female (5)Posts/လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တာမွေမြို့နယ်ရှိ Distribution Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ ချက်ချင်းအင်တာဗျူး ၀င်ရမည်။ Sales Staff – Male /Female (5)Posts/လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် /တာမွေမြို့နယ်။ - အဝေးသင်ဖြင့်ကျောင်းဆက်မတက်သူများလျှောက်ထားနိုင် သည်။ - Construction ပစ္စည်းအရောင်း ပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။ - ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ရမည်။ - စနေနေ့တ၀က်ပိတ်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Staff – Female (5)Posts/လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တာမွေမြို့နယ်ရှိ Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1)Sales Staff – Female (5)Posts/လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ်/တာမွေမြို့နယ်။
- ၁၀ တန်းအောင် (သို့) အဝေးသင်တက်ရောက်နေသူများလျှောက် ထားနိုင်သည်။ - ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - အပြင်သွားလာနိုင်ရမည်။ - Hotel သုံး Product များရောင်းရာတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
Sales Staff – Female (5) Posts
Location in : Pyi Gyi Ta Gon
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Car Showroom တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တစ်ပတ်အတင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။မန္တလေးမြို့ ။ 2.Sales Staff – Female (5) Posts /လစာ - ၁၈၀, ၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့ နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၃ မှ ၂၉) နှစ်အတွင်းရှိရမည်။အရပ် (၅ ပေ ၂ လက်မ ) အထက်ရှိရမည်။ - Sales ပိုင်းအတွေ့ အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။ - Truck & Machinery အတွေ့ အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- Email : mdygasrecruit.hr2@gmail.com , mdygasrecruit.hr3@gmail.com Phone Number - 09750108882 , 09750108883 , 09750108884 Viber Phone Number – 09750108882 , 09750108883 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် D4 ၊ သီရိရိပ်သာ ( ၂ ) ၊ ၆၅ လမ်း ၊ ၃၃ လမ်း x ၃၄ လမ်းကြား ၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ၊ မန္တလေးမြို့ ။
Sales Staff– Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Electronic Showroom Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Sales Staff– Female (5)Posts /လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် /မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။
-တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ -သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည် ။ -အလုပ်ချိန် မနက် ၉ နာရီ ၊ ည ၉ နာရီ ၊ ၂ ရက်ဆင်း ၁ရက်နား ဆင်းရမည် ။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Staff – Female (5) Posts /လစာ - ၁၈၀, ၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့ ။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Car Showroom တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တစ်ပတ်အတင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။မန္တလေးမြို့ ။ 1.Sales Staff – Female (5) Posts /လစာ - ၁၈၀, ၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့ ။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၃ မှ ၂၉) နှစ်အတွင်းရှိရမည်။အရပ် (၅ ပေ ၂ လက်မ ) အထက်ရှိရမည်။ - Sales ပိုင်းအတွေ့ အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။ - Truck & Machinery အတွေ့ အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223783, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Staff - Female (5)Posts /လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Electronic Showroom တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Sales Staff - Female (5)Posts /လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် /မရမ်းကုန်းမြိုနယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်း လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - ဘယ်မြို့နယ်မဆိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ - အသက် (၂၀) – (၂၅) ဝန်းကျင်ရှိရပါမည်။ -အလုပ်ချိန် မနက်(၉)နာရီ ည(၉)နာရီ ၊ (၂)ရက်ဆင်း တစ်ရက်နား ၊ အဆောင်စီစဉ်ပေးပါမည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Man – Male (5) Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် /လှိုင်သာယာမြို့ နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Manufacturing Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည် Sales Man – Male (5) Posts /လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် /လှိုင်သာယာမြို့ နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၅) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ - Heavy Machine (သို့ ) Construction ပိုင်းအတွေ့ အကြုံ(၃)နှစ်ရှိရမည်။ - ကားမောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။ကားမောင်းကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Ferry ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223783, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sale Staff - Male (5)Posts
URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Car Showroom တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။
Sale Staff - Male (5)Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်+ကော်မရှင်း+ တခြားခံစားခွင့် / မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည် အရောင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည် (ကားအရောင်းအတွေ့အကြုံရှိသူများကို ဦးစားပေးမည်) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိရမည် English အခြေခံပြောနိုင်ရမည် ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ ရိုးသားကြိုးစားရမည် Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Staff – Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Cosmetic Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1.Sales Staff – Female (5)Posts /လစာ - ၁၂၀,၀၀၀ ကျပ် /မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ - ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - အပြင်သွားလာနိုင်ရမည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Staff - Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Showroom တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1. Sales Staff – Female (5)Posts /လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် /အင်းစိန်မြို့နယ်။ - ၁၀ တန်း - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - အရောင်းပိုင်းစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ –ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )